Weerarrada Burcad-badeedda oo Hoos u Dhacay
Warbixin uu soo saaray xafiiska baddaha caalamiga ah ayaa lagu sheegay in 70 weerar ay dhaceen 9-kii bilood ee la soo dhaafay sannadkan, halka sannadkii hore ee 2011-kii ay weerarradu ahaayeen 233.
Warbixin cusub oo laga soo saaray weerarada burcad-badeedda ayaa lagu sheegay in tirada maraakiibta ay weerareen burcad-badeedda ay heerkii ugu hooseeyey hoos ugu dhacday tan iyo 2009, iyadoo afduubka maraakiibtuna uu ku fidday gacanta Guinea.
Warbixintan cusub oo uu soo saaray xafiiska baddaha caalamiaga ayaa sheegtay in burcad-badeedda Soomaaliya ay qaadeen 9-kii bilood ee sannadkan ugu horreyeye 70 weerar, taasoo ka yar 199 weerar ee ay qaadeen sannadkii hore.
Warbixinta ayaa sheegtay in la soo wariyay in burcad-badeeddu ay isku dayeen weerar hal markab intii u dhaxeysay, July iyo Sepmtember, halka marka loo bar-bardhigo isla bilahan sannadkii hore la soo wariyay 36 weearar.
Kooxaha Shirkaddaha maraakiibta, ayaa sheegay in burcad-badeedda ay weerarada ka joojiyeen siyaasaddaha ciidamada badda ee caalamiaga ah ee ku sugan biyaha u dhow Barriga Afrika iyo waliba isticmaalka maraakiibta ee ilaalalada hubeysan.
Xafiiska badduhu wuxuu sheegay in burcad-badeedda gacanta Guinea ay noqonayo kuwo khatar ah, iyadoo 34 dhacdo la soo wariyay 9-kii bilood ee sannadkan, taasoo ka badan 30 weerar ee ay burcad-badeeddaasi qaaday sannadkii hore.
Warbixin uu xafiisku soo saaray ayaa lagu sheegay in 70 weerar la soo wariyay inay dhaceen 9-kii bilood ee la soo dhaafay sannadkan 2012, halka marka la bar-bar-dhiggo sannadkii hore ee 2011-kii ay weerarradu dunidu ahaayeen 233.